န၀ရူပ ဗျာလ ပေါ်ပေါက်လာပုံ(ဆောင်းပါး) | https://khaingkyawsanmusics.wordpress.com
ရခိုင့်ရိုးရာ စည်တော်ပေါ်ပေါက်လာပုံ(ဆောင်းပါး) →
န၀ရူပ ဗျာလ ပေါ်ပေါက်လာပုံ(ဆောင်းပါး)
ကမ္ဘာဦးကတည်းက လူမျိုးတိုင်း ဘာသာတိုင်း၌ ၄င်းရို့၏ ဒဏ္ဍာရီ ဆန်သော အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတ ရုပ်ထုများ ဟိခကြသည်။ အလားတူပင် ရခိုင် လူမျိုး၌လည်း ဒဏ္ဍာရီဆန်သော အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတ ရုပ်ထု တစ်ခုဟိသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းရုပ်ထုကို ကမ္ဘာကပင် မဆိုထားနာင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ပင် လူအများစုက မသိကြသိမ့်ပါ။ ၄င်းရို့ကို ရှီဟောင်း ဇာတီပုထိုးများ၏ ကျောက်ဆစ်လက်ရာများတွင် ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးဟိသော ရှိဟောင်းလက်ရာ အမွီအနှစ်အဖြစ် တွိ့နိုင်ပါသည်။ ယင်း သတ္တ၀ါကို ရခိုင် လူမျိုးရို့က “ဗျာလ” ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ အဆိုပါ သတ္တ၀ါ မှာရခိုင် လူမျိုးရို့၏ရှီရိုးစဉ်ဆက် တစ်လျှောက် ဟိခသော ဒဏ္ဍာရီဆန်သော သတ္တ၀ါဖြစ်သည်။
ယင်း ‘ဗျာလ’ ကို သတ္တ၀ါ ကိုးမျိုး၏ ကောင်းမြတ်သော ခွန်အား စွမ်းအင်ဟိသော သတ္တ၀ါရို့၏ အစိတ် အပိုင်းများနှင့် ပေါင်းစပ် ထားသည်။ယင်းသို့ သတ္တ၀ါ ကိုးမျိုး၏ အစိတ် အပိုင်းများနှင့် ပေါင်းစပ် ထားခြင်းကြောင့် ‘န၀ ရူပ ဗျာလ’ ဟုလည်းခေါ်သည်။ အဆိုပါ ‘န၀ ရူပ ဗျာလ’ ရုပ်တွင် ပါရေသတ္တ၀ါ ကိုးမျိုး၏ အစိတ်အပိုင်း များမှာ –
• ၁. ဆင်နှာမောင်း • ၂. သမင်မျက်လုံး • ၃. ကြံ့ဂြို • ၄. ကြက်တူရွေး(ကျီး)လျှာ • ၅. ခြူး (ငါးကြင်းကွက်) • ၆. ဒေါင်းအမြီး • ၇. မြင်းနားရွက် • ၈. ကျားအစွယ် • ၉. ခြင်္သေ့လက်ဝါး တို့ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ထူးခြားသော စွမ်းအင်ဟိရေ အစိတ်အပိုင်းများကို တစ်ကောင်တည်း ဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ် ထားခြင်းမှာလည်း ဗျာလ သတ္တ၀ါ ၏ ထူးခြားမှုကို ရည်ညွှန်းထားရေ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်သည်။ ဗျာလတွင် ပါရေအစိတ်အပိုင်းများ အနက် ကြက်တူရွေး (ကျီး) လျှာသည် စကား ပရိယာယ် ကြွယ်ဝခြင်းကို လည်းကောင်း ၊ ဒေါင်းအမြီးသည် လှပ တင့်တယ် ခြင်းကို လည်းကောင်း ၊ မြင်း နားရွက်သည် အကြား အာရုံ ထက်မြက်ခြင်း ကိုလည်းကောင်း ၊ သမင်မျက်လုံး သည် အမြင်အာရုံ စူးရှခြင်းကို လည်းကောင်း ၊ငါး(ခြူး) ၏ ကိုယ်ထည်သည် လျင်မြန် ဖျတ်လတ်ခြင်းကို လည်းကောင်း ၊ ကြံ့ဂြို ၊ ကျားစွယ် ၊ခြင်္သေ့ လက်ဝါး ၊ ဆင်နှာမောင်း သည် စွမ်းအင် ကြီးမားခြင်းတို့ကို လည်းကောင်း အသီးသီး ကိုယ်စားပြုပါသည်။
အဆိုပါ သတ္တ၀ါ ကိုးမျိုးရို့၏ အစိတ်အပိုင်းဖြင့် တန်ဆာ ဆင်အပ်သော သတ္တ၀ါအား ထားခြင်းဖြင့် “အဗျာလော- ဘေးဥပါဒ်ကို မဖြစ်စီတတ်ဘဲ ၊ လာဘော – လာဘ်လာဘကိုသာ ဖြစ်စီတတ်၏“ ဟု ရခိုင်လူမျိုးရို့ ယုံကြည်ထားကြသည်။
ဗျာလကို ရခိုင် ဝေသာလီခေတ် သာသနိက အဆောက်အအုံ များတွင် စတင်တွိ့ရသည်။ ယင်းထက် ရှီကျသော ရုပ်ထုများလည်း ဟိကောင်း ဟိနိုင်ပါသိမ့်သည်။ မင်္ဂလာ အခမ်းအနားများ၌ သုံးစွဲသော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများတွင် အနည်းငယ် တွိ့ရပါသည်။ ရခိုင်လူမျိုးရို့၏ ရှီဟောင်း အထိမ်းအမှတ် တခုဖြစ်တေ ‘န၀ ရူပ ဗျာလ’ ကို ကျောင်းကန်၊ ဇာတီ ပုထိုးများတွင် လည်းကောင်း ၊ ထင်ရှားရေ အဆောက် အဦး များတွင် လည်ကောင်း၊ စွမ်းအင် ကိုးမျိုး ပေါင်းစု ထားရေ အစောင့် အယှောက် သတ္တ၀ါ အဖြစ် ထားလေ့ဟိပါသည်။